Ei k.t.a uploadedaphoto at Fuji Sushi6years ago
gineal uploadedaphoto at Fuji Sushi6years ago
Jųé Júë like Fuji Sushi6years ago
gineal reviewed Fuji Sushi6years ago
One of the best Japanese restaurant in town. The tastes of sushi, sashimi, soup & grilled items are really good.
Jųé Júë reviewed Fuji Sushi6years ago
ဆိုင်ကနဲနဲကျဉ်းတော့ သိပ်တော့အဆင်မပြေဘူး..but.အရသာအရမ်းကောင်းတယ်.မြန်လဲမြန်တယ်.ရေဘဝဲချဉ်စပ်ကြော်.ကင်ချီ .ပုဇွန်တင်.အကြိုက်ဆုံးပဲ.၁၀၀၀.၁၅၀၀ဆိုတော့ တန်လဲတန်တယ်.
mylann uploadedaphoto at Fuji Sushi6years ago
Nwe Ei Phyo reviewed Fuji Sushi7years ago
ဆိုင်လေးကသေးပေမယ့် အမြဲလူပြည့်နေတယ်။ ဝန်ဆောင်မှုလည်းသိပ်မကောင်းဘူး။ အရသာကတော့... အားပါး.... စားဖူးသမျှထဲမှာ အကောင်းဆုံးပဲ။ အမြဲသွားစားဖြစ်တယ်။
mmfoodie Fuji Sushi7years ago
Si Thu Thet Naing Fuji Sushi7years ago
ဆိုင်လေးက တအားကျဉ်းတယ်။ ဝန်ဆောင်မှုလည်း သိပ်မကောင်းဘူး။ ဒါပေမယ့် Sushi တွေ၊ Sashimi တွေ တအားကြိုက်လွန်းလို့ အမြဲသည်းခံပြီး သွားစားဖြစ်တယ်။
mylann uploadedaphoto at Fuji Sushi7years ago
mmfoodie reviewed Fuji Sushi7years ago